China 1.59 HMC Polycarbonate Eyeglass Lens orinasa sy mpanamboatra | Kingway
Index Production savaivony Color
1,59 Solomaso polycarbonate 65 / 70mm Clear
Abbe sanda Gravity manokana Coating Tanjon'ny herinaratra
Ny tombony azo amin'ny solomaso PC.
1. Sakano ny jiro UV manimba sy taratra masoandro.
Ny solomaso polycarbonate koa dia afaka manakana mihoatra ny 99% ny taratra UV, miaro ny mason'ny ankizy amin'ny tara-pahazavana manimba.
2. Ny hateviny manify, maivana ary enta-mavesatra ho an'ny tetezan'ny orona ny valanoranon'ny orona Polycarbonate 1.59 dia fitaovana manify sy maivana, izay mahatohitra ny fiantraikany.
3. Mety amin'ny karazana sary rehetra, indrindra fa ny rimless and half-rimless frame
Ny azo antoka amin'ny solomaso PC.
Rehefa ahiahy ny fiarovana ny maso dia matetika ny lantina polycarbonate no safidy tsara indrindra amin'ny masomasoanao.
Na ny lantom-boasary polycarbonate na Trivex aza dia mahia sy maivana kokoa noho ny solomaso plastika mahazatra. Izy ireo koa dia manome fiarovana 100 isan-jato amin'ny hazavan'ny UV manimba ny masoandro ary maharitra 10 heny noho izany ny fanoherana ny vokany noho ny solomaso plastika na fitaratra.
Ity fitambarana fampiononana maivana ity, fiarovana UV ary fanoherana ny fiantraikany dia mahatonga ireo solomaso ireo ho safidy tsara indrindra ho an'ny solomaso ankizy.
Previous: CR39 1.499 White solomaso fahitana optika UC
Lensa solomaso bifocal
Bikan-tsolosaina vita amin'ny Semi eyeglass